အဆိုပါဒုက္ခသည်စင်တာတွင်အွန်လိုင်းသင့်ရဲ့ privacy ကိုရိုသေလေးစား.
ဒါဟာ privacy ကိုအသိပေးများအတွက်သီးသန့်တည်ရှိမှုအလေ့အကျင့်တွေ့ရမှာပါ (က်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာ). ဒါဟာ privacy ကိုအသိပေးဤဆိုဒ်အားဖြင့်စုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်မှတစ်ခုတည်းကိုသာသက်ဆိုင်သည်. ဒါဟာအောက်ပါတို့မှသငျသညျကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်:
သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကကျွန်တော်တို့ဆီကတစ်ခုခုအနာဂတ်အဆက်အသွယ်များထဲကရွေးချယ်စေခြင်းငှါ. သငျသညျမှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့်သည့်အချိန်တွင်မဆိုအောက်ပါအချက်များကိုလုပျနိုငျ: privacy@therefugeecenter.org.
သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းများကိုရှိသည်သို့မဟုတ်ကြှနျုပျတို့သညျဤ privacy ကိုမူဝါဒဖြင့်လိုက်နာကြသည်မဟုတ်ဟုခံစားရလျှင်, သငျသညျမှာအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်သင့်: privacy@therefugeecenter.org.